असोज २९, २०७५ बिगुल न्यूज- SG
काठमाडौँ, २९ असोज: नेपाल प्रहरीले दशैँका अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न तीन रुटमा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
प्रहरीको निःशुल्क बसहरु बिहान ११ देखि अपराह्न ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गत वर्षपनि अष्टमी, नवमी र विजयादशमीको दिन काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेको थियो ।
प्रकाशित : सोमबार, असोज २९, २०७५१९:३१
स्कार्पियो र स्कुटर ठोक्किदा श्रीमान-श्रीमतीको मृत्यु!
जीप दुर्घटना हुँदा विदेशी नागरिक हुलेस सेभेलको घटनास्थलमै मृत्यु !
प्रतिनिधि सभा बैठकमा गाँजालाई कानूनी मान्यता दिन नेकपा सांसदको माग !
माइक्रोबसको ठक्करबाट सूकीलाई स्कर्टिङ गर्न गएका ट्राफिक असई गम्भीर घाइते !
बमकाण्डले सम्झाएको विगत, १६ बर्ष एउटै कमिटीमा रहेर जनयुद्ध दिवस मनाउन थबाङ हिँडेका “बादल” र “विप्लव” …